Jwxo-shiil, oo Heeso Jacayla Jaango iyo Gabdhaha u Jiibiyaa ay Jahawareer Ugu Qaadeen – Rasaasa News
Jul 31, 2010 Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, oo Heeso Jacayla Jaago iyo Gabdhaha u Jiibiyaa ay Jahawareer Ugu Qaadeen, Somali
Kulankii ugu dambeeyey ee galggalashada oo galabata Jwxo-shiil, oo gacmaha ka hadlayaa uu ugu gunaanaday garabkiisa gaggabsan gayiga Sweden, goor ay wafti ONLF ah kullan caalami ah kula leedahay dawlada wadaaga ah ee Itobiya.
Wararka aan ka helayno caasimada dalka Sweden ee Stokhom, ayaa sheegaya in kooxda Jwxo-shiil, ay isugu timid kulankeedii ugu dambeeyey. Kulankan oo uu abaabulkiisa uu waday muddo dheer ninka u ah Jwxo-shiil, hantidhawrka Maxamed Cali [Seedi], oo ay walaalo yihiin afada Jwxo-shiil.
Dadka ugu yimid kullanka ayaa aad u koobnaa, una badnaa dad habarteey habarteey lagu keenay oo ay heeso jacayla ku maaweelinayeen si ayna u seexan Jaango iyo gabadhaha u jiibiya. Dadka ayaa ahaa dad ay ka maqan tahay xiisad rabitaan, balse hoosta iska lahaa “Duqu wuu waalan yahay nin aduun la socdaba ma ah ummadii heshiis iyo nabad bay qaadatay isna riyo aan niyad ka ahayn buu wadaa.”
Jwxo-shiil, ayaa mar makarafoonka loo dhiibay gacmaha uun ka hadlayey isaga oo ku celcelinaya, “hore waxaa loo odhan jiray Atitixaad Alislami, magacii ayey badasheen oo Itobiya ayey u tageen.” In kasta oo Saaloon haween la geeyey loona Inadhakuulay, ayaa waxaa hadana ka muuqday Jwxo-shiil, niyad jab ba,an [serious stress], oo ka dhigay markuu hadlayey sidii ruux qosol jilaya.
Dadka meesha yimid waxay badankoodu ahaayeen beelaha Mareexaan iyo Habar-gidir oo baryahanba isku dayaya sidii ay uga horiman lahaayeen nabada ay qaateen ururadii hore ula dagaalami jiray dawlada Itobiya iyo dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Lama ogga wax ku kalifaya xiligan in beelahan oo hore uga soo horjeeday ururada Itobiya dagaalka kula jiray waxa ku dhaliyey in jeclaadaan in colaadi ka sii socoto dhulka Somalida Ogadeeniya.
Shirka waxaa la yimid Jwxo-shiil, oo ag joogay Maadeey [abtidoon] iyo wadaadka la yidhaahdo Diirane oo ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ay ogg yihiin waxa ay galaan iyo wax ay gudoon.
Nin Somaliyeed ayaa Bari wuxuu u xoogsi tagay dal ka mid ah dalalka Carabta, meeshii ugu horaysay ee uu shaqada waydiistay, ayaa waxaa la waydiiyey “magaciisa,” kolkaas ayuu ku jawaabay “Nuur,” ninkii Carabka ahaa ayaa yidhi “hadii uu Nuurkoodu yahay adiga dadka aad ka timid tolow sidee ayey u egg yihiin.” Xornimada ay doono dadka noocaas ah ummada Somalida Ogadeeniya ha ka maqnaato.
Wariyaha noo joogay kulkankaas ayaa waxaa uu sheegay u malaynmaayo in ay kooxda Jwxo-shiil, isugu imandoonaan kullan dambe sida aan ka arkayey niyada meesha tiil.
Guddoomiyaha Ururka ONLF, Eng. Salaxudin Cabdiraxman, oo ay Ideecada BBC-du Waraysatay